डोल्पाका सांसद बुढाले वामदेव गौतमको सांसद बन्ने योजना यसरी पारे तुषारापात, अाेली भए फायर! -
डोल्पाका सांसद बुढाले वामदेव गौतमको सांसद बन्ने योजना यसरी पारे तुषारापात, अाेली भए फायर!
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:५३ 424 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ । डोल्पाका निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा आउने नेकपाका नेता वामदेव गौतमको योजनामा तुषारापात भएको छ । पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
सांसद बुढाले डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिका क्षेत्रका कार्यकर्तासँग धेरै छलफल गरे । माथिल्लो डोल्पाका आफ्ना पार्टीनिकट जनप्रतिनिधिलाई दुनैमा बोलाएर छलफल गरे । दुई नगरपालिकाका धेरै मतदाता भएको क्षेत्रमै पुगेर अन्तत्र्रिmया गरे । दुवै नगरपालिका प्रमुख तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएकाले बुढाले माहोल बनाउन बल गरेका थिए । तर, मतदाताले राजीनामा नदिन सुझाब दिए ।,आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
प्रतिबन्धित विप्लव’ समूहका जिल्ला
‘पार्टी नेतृत्वमा अलग–अलग धार